संविधान संशोधनमा विधेयक पास गराउन कांग्रेस सक्रिय » खबरहरुको एउटै केन्द्र
संविधान संशोधनमा विधेयक पास गराउन कांग्रेस सक्रिय
मंगलवार, माघ २५, २०७३ १०:५७ मा प्रकाशित !
काठमाडौं- कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन विधेयक पास गराउन सक्रियता देखाएका छन्। देउवाले सोमबार माले महासचिव सिपी मैनालीसँग भेट गरी संशोधन विधेयक पारित गराउन सहयोग मागेका छन्। संशोधन विधेयक पास भएमा राजनीतिक समस्या सामधान हुने भन्दै सहयोग गर्न उनले मैनालीलाई आग्रह गरेका थिए।
मैनालीले भने संशोधन विधेयक राष्ट्रहितको पक्षमा नरहेको भन्दै विधेयक पास गराउन आफूले सहयोग नगर्ने प्रस्ट पारेका थिए। ‘उहाँ (देउवा) ले संशोधन विधेयक पास गर्न सहयोग माग्नुभयो,’ भेटपछि नागरिकसँग मैनालीले भने, ‘विधेेयक राष्ट्रहितविपरीत भएकाले संशोधन प्रस्ताव पास गर्न सहयोग गर्न सक्दैनौं भनेँ।’
देउवाले आइतबार मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग भेट गरी संशोधन विधेयक पास गराउन आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ जुटाउन आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। देउवा निकट नेता रक्षामन्त्री बालकृण खाँणले संविधान संशोधन विधेयक पास गराउन लागि कांग्रेसले पहल गरेको बताए। ‘संशोधन विधेयक पास गराउन दुई तिहाइ जुटाउन कांग्रेसले पहल सुरु गरेको छ।’ आइतबार मधेसी मोर्चासँगको वार्तापछि कांग्रेसका नेताहरूको छुट्टै अनौचारिक छलफल भएको थियो। छलफलमा विधेयक पास गराउन कांग्रेसले पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
देउवा निकट स्रोतका अनुसार देउवा सरकारलाई समर्थन गरेका तर सरकारमा सहभागी नभएका दलसँग पनि कुराकानी गर्ने तयारीमा छन्। मधेसी नेताहरूलाई देउवाले संशोधन विधेयक पास गरेरमात्र चुनावमा जाने आश्वासन दिएका छन्।
PREVIOUS POST Previous post: प्रदूषणबाट ९० प्रतिशतको मृत्यु
NEXT POST Next post: करोडौं कर नतिर्ने शैक्षिक संस्था तथा अस्पताल कालो सूचीमा (नामावली सहित)
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, माघ २५, २०७३ १०:५७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, माघ २५, २०७३ १०:५७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, माघ २५, २०७३ १०:५७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, माघ २५, २०७३ १०:५७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, माघ २५, २०७३ १०:५७